Ọrụ nwata akwụkwọ: maka ime mgbanwe na mahadum nke ọma
Mgbe ịdebanye aha Kedu ka esi hazie? Gịnị ma ọ bụrụ na m efuo? Kedu mgbe ule a na-eme? Kedu ihe bụ CM? Gịnịkwanụ ma ọ bụrụ na ihe m mere adịghị amasị m? Enwere njem nlegharị anya ụlọ ọrụ ahụ? Kedu onye m ga-aga ma ọ bụrụ na aghọtaghị m? Kedu mgbe mmalite afọ akwụkwọ?...
Ọtụtụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị tupu anyị abanye mahadum!
Soro nzọụkwụ Juliette na Félix, ụmụ akwụkwọ ọhụrụ na mahadum, wee chọta azịza nye ajụjụ gị na ndụmọdụ gị iji mee ka nzọụkwụ mbụ gị na agụmakwụkwọ dị elu gaa nke ọma.
Ebumnuche MOOC a bụ maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị. Ebumnobi ya bụ ibelata ụjọ na ileba anya n'ụzọ doro anya akụkụ ụfọdụ nke usoro ndụ ọhụrụ a.
Ọdịnaya ewepụtara na nkuzi a bụ ndị otu nkuzi sitere na agụmakwụkwọ ka elu na mmekorita ya na Onisep. Ya mere ị nwere ike ijide n'aka na ọdịnaya ahụ bụ nke a pụrụ ịdabere na ya, nke ndị ọkachamara na-emepụta ihe.
Ọrụ nwata akwụkwọ: maka ime mgbanwe na mahadum nke ọma Ọnwa Iri na Abụọ 17, 2021Tranquillus
GỤỌ Ọgwụgwụ nke ọrụ telivishọn na 100%, ite enyere ikike… Ihe ezubere maka ịlaghachi na ụlọ ọrụ ahụ
gara agaỌrụ ndụ
-esonụỌrụ na gburugburu ebe obibi na atụmatụ iji ala
Mmụba ụgwọ ọnwa maka ndị ọrụ na ngalaba medico-social
01| Kedu ihe bụ CRPE?
Chọpụta ọgbụgba ama Zeineb, onye mmụta ifocop bụ onye ghọrọ onye nrụpụta na onye njikwa azụmaahịa.
Ihe ndị dị mkpa nke otu